Minisiteran’ny Atitany : “Ny samy mpanohitra no mifidy ny ho lehibeny” | NewsMada
Minisiteran’ny Atitany : “Ny samy mpanohitra no mifidy ny ho lehibeny”
“Tsy ny minisiteran’ny Atitany akory no hanendry ny lehiben’ny mpanohitra, fa ny samy antoko mpanohitra no tokony hifanatona ao anatin’ny vondrona parlemantera”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Atitany, Rasolomaholy Rakotozanany Célestin, teny Anosy, omaly, momba ny fahabangan-toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena.
Ny vondrona parlemantera mpanohitra no mifampifidy ny hatao lehiben’ny mpanohitra, araka ny fanazavany. Tsy misy kitihina intsony ny lalàna, satria tsy nilaza izany ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Efa misy ny lalàna. Ny fampiharana azy no mila fanatonana. Tsy voatery hanampy lalàna hafa intsony, fa efa ampy ihany ny lalàna. Tsy misy antony tsy hampiharana azy aloha izao.
Eo anivon’ny antoko politika ao anatin’ny Antenimierampirenena, vondrona parlemantera, no nambaran’ny HCC. Tsy lalàna ivelany intsony io, fa mety ho fampiharana na fanamboarana, raha misy fanamboarana tokony hatao, ao anatin’ny vondrona parlemantera: ny fitsipika anatin’ny Antenimierampirenena, ohatra.
“Fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fandraisana anjaran’ny antoko politika amin’ny fiainam-pirenena sy ny fiainana politika eto Madagasikara”, hoy izy momba ny fanofanana ny mpitarika antoko politika, iarahana minisiteran’ny Atitany sy Pnud, eny Anosy, hifarana anio.